ထက်ထက်မိုးဦး…အေးသူစံနဲ့ ဝေဖန်ချက်များ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ထက်ထက်မိုးဦး…အေးသူစံနဲ့ ဝေဖန်ချက်များ…
Posted by သတင်းလူသား on May 23, 2010 in Myanma News, News |3comments
မနေ့က ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပို့စ်တစ်ခုရေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူတွေဆီက ဝေဖန်စာတွေရောက်လာပါတယ်…
(ကျွန်တော်ပို့စ်မှာရေးသွားတဲ့စာတွေကတော့ – ဝေဖန်ချက် ၁ – ဒီသတင်းကတော့ အရမ်းကို Hot ဖြစ်နေပါလား… ဝေဖန်ချက် ၂ – နေရာတကာ ဒါတွေပဲ ကြားနေရတယ်…
ဝေဖန်ချက် ၃ – အမှန်အတိုင်းပြော၇၇င် ထက်ထက်နာမည်ကျနေချိန်ရယ် ယခုတနှစ်အတွင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲ တွေရယ် အဲလိုအခြေအနေကြောင့် အနည်းနဲ့အများ စိတ်ဒုက္ခ ခံစားနေရချိန်မှာ မေးတဲ့သူအမှားလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်.
ဝေဖန်ချက် ၄ – လူနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်၊တစ်ယောက်ကတရားစွဲ၊ဒီသတင်းတင်မိရုံနဲ့ ထုတ်ဝေခွင့်အပိတ်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့…သနားဖို့တောင်ကောင်းနေပါပြီ…The Voice… ရယ်
ဟုတ်ပါတယ်…အဲလိုပါပဲ ခုသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါရှိလာတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်…
အနုပညာရှင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကတစ်ဖက်၊ စာနယ်ဇင်းသမားနဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိသူတွေက တစ်ဖက်၊ နောက် အဲနှစ်ခုကြားက ရှိနေသူတွေလည်းပါပါတယ်….
ယခုအဖြစ်အပျက်မှာ ဘယ်သူမှားတယ်၊ ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း စာနယ်ဇင်းလောကသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် မပြောချင်ပါ…
စာနယ်ဇင်းသမား၊ သတင်းစာဆရာတစ်ဦးသည် အများပြည်သူသိရှိစေရန်အတွက် သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သတင်းအချက်အလက်ကို သေချာခိုင်လုံတိကျစွာရယူရပါတယ်။ ထို့အတွက် သတင်းသမားတစ်ယောက်က သတင်းရင်းမြစ်ထံကနေ မေးခွန်းများကို သေချာတိကျစွာမေးယူရတဲ့အခါမျိုးကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သတင်းရင်းမြစ်အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ့်၊ ထိခိုက်စေမယ့် မေးခွန်းမျိုးပါလာမယ်ဆိုရင် သတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က အဲဒီ့လိုမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေကြားခြင်းမပြုပဲနေနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သတင်းရင်းမြစ်အနေနဲ့ ဆက်လက်ဖြေကြားခြင်းမပြုလိုပါကလည်း ပြတ်သားစွာပြောဆို၍ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကို အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သတင်းရင်းမြစ်ဘက်ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ။ ခုလိုကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ သတင်းရင်းမြစ်ဘက်က လွန်သွားတယ်လိုဆိုချင်ပါတယ်။ (အခြားနောက်ကွယ်က နှစ်ဦးချင်းပြဿနာများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ခုလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ မကျူးလွန်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။)
သတင်း လူသား has written 12 post in this Website..
View all posts by သတင်းလူသား →
Thwe zin says:
ညီမပြောချင်တာလေးကတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ သည်းခံနိူင်တဲ့ အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်သွားတော့ မဖြစ်သင့်တာ တွေဖြစ်သွားတာဘဲ…။ ညီမထင်တာတော့ သတင်းဆို တာ ကိုယ်ကလိုချင်တာဘဲ အဲ့ဒီကိုယ်လိုချင်တဲ့သတင်းကို တစ်ဖက်သားမနစ်နာ နိူင်တဲ့ စကားလုံးခိူခိူတွေနဲ့ သတင်းယူသင့်တယ်လို့ထင်မိတယ် ။အနုပညာ သမားဘက်ကလည်း သူမေးတဲ့ မေးခွန်း ဟာ သည်းခံမှု့အတိုင်းအတာ လွန်သွားလို့ ဒီလိုဖြစ်သွားတာ။ အပြင်လောကမှာ လည်း ဒီလိုကိစ္စမိူးတွေဖြစ်တတ်တာဘဲလေ။ ဖြစ်နိူင်ရင် ပေါ့ မထက်ကိုဗူးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြစေချင်တယ် ။ ခု ကြားနေမြင်နေ ဖတ်နေရတာတွေကတော့ ပါးရိုက်တယ်ဆိုိ စကားလုံးတွေဘဲမြင်နေရတယ် ။ ဒီစာရေးတာဟာ ဘယ်သူကိုမှထိခိုက်တာ စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနော်………..
If it happened in Hollywood, the whole community will condemn the celebrity for assault and rudeness. That celebrity`s character will go down the dirty drain as river of no return. The celebrities are the property of public. As such the public and private lives of concerned celebrity become the gossip topic of public and news media. I also wants to know what reporter`s question cause the havoc here. In the failed state, dictators` ability to gun down the demonstrator is somehow comparable to rich celebrity`s ability to assault and dehumanise the smaller than life reporter. We have to ask ourselves whether to denounce the concerned celebrity for her rudeness and extravagances. Can the weaker and poorer win the match against the stronger and richer? It is not possible in the third world.
မှုံရွှေရည် လေးကသနားစရာ လေးပါကွယ် ။